Kyphosis (ခါးကုန်းခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Kyphosis (ခါးကုန်းခြင်း)
Kyphosis (ခါးကုန်းခြင်း) ကဘာလဲ။
ခါးကုန်းတယ်ဆိုတာ နောက်ဘက်ကျောရိုးမက ရှေ့ဘက်ကို ကွေးသွားတာကိုခေါ်ပါတယ်။ နည်းနည်းပါးပါးကွေးတာကတော့ပုံမှန်ပါပဲ ဒါပေမယ့် “ခါးကုန်းခြင်း” ဆိုတာကတော့ တော်တော်များများ ကွေးသွားတာကို ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုပါတယ်။ လူတိုင်းက သူတို့ရဲ့ ကျောရိုးမမှာ ဒီဂရီအနည်းငယ်လောက်ကွေးတာတော့ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း ၄၅ဒီဂရီထက်ပိုပြီးကွေးရင်တော့ တအားဆိုးတယ်လို့ယူဆပါတယ်။
Kyphosis (ခါးကုန်းခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ခါးကုန်းခြင်းဆိုတာ မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆိုဖြစ်နိုင်ပြီး အမျိုးသမီးကော အမျိုးသားမှာပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။
(တစ်ခြား အချက်အလက်တွေသိရဖို့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။)
Kyphosis (ခါးကုန်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အတွေ့ရများတဲ့ ခါးကုန်းခြင်းရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
-ရှေ့ဘက်ကိုကုန်းကုန်းကြီး ဖြစ်နေတဲ့အသွင်အပြင် ဘေးဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့ လူနာက ရှေ့ကိုကုန်းနေတဲ့ပုံစံလို့ ပြောလို့ရပါတယ်
-သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ ခါးနာခြင်းကနေ ပြင်းထန်သောခါးနာခြင်း
(အပေါ်မှာမပြောထားတဲ့ တစ်ခြားရောဂါလက္ခဏာတွေကျန်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုအကြောင်း သိချင်ပါက သင့်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။)
သင့်ဆီမှာ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ လက္ခဏာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ်မေးစရာမေးခွန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓါကိုယ်က တုံ့ပြန်ပုံမတူညီကြပါဘူး။ သင့်အတွက်ဘယ်အခြေအနေက အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ သင့်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Kyphosis (ခါးကုန်းခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ကျောရိုးဆစ် တစ်ခုချင်းစီက ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ကျောရိုးမကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ ဆလင်ဒါ ပုံစံ အထပ်အထပ်လေးတွေစီထားသလိုရှိနေရပါတယ်။ ခါးကုန်းခြင်းက အပေါ်ဘက်နောက်ကျောက ကျောရိုးဆစ်တွေက သပ်ပုံစံဖြစ်လာခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်။ ဒီလို ပုံစံပျက်ခြင်းဟာ ပြသနာမျိုးစုံကြောင့် ဖြစ်ရပါတယ်။၎င်းတို့ကတော့-
-အရိုးပွခြင်း။ ဒီလိုအရိုးပါးခြင်းပွခြင်းပြသနာဟာ ကျောရိုးဆစ်တွေကျိုးလို့ ခြေမိသလိုဖြစ်တာတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲရလာဒ်ပါ။ အရိုးပွခြင်းဟာ အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေမှာဖြစ်တတ်ပြီး အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ် ပြီးတော့ ကော်တီကိုစတီးရွိုက်တွေကို ပမာဏအများကြီးနဲ့ အချိန်ွ ကြာရှည်စွာစွဲသုံးရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
-ခါးရိုးအဆစ်ပျက်စီးယိုယွင်းလာခြင်း။ အဝိုင်းပုံစံရှိတဲ့ ခပ်ပျော့ပျော့နဲ့ ခါးရိုး disks လေးတွေဟာ ကျောရိုးဆစ်တွေကြားမှာ ကူရှင်ပုံစံကြားခံရှိနေပါတယ်။ အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ ဒီ disks ပြားလေးတွေဟာ ခြောက်သွေ့ ရှုံတွလာတတ်တဲ့အတွက် ခါးကုန်းခြင်းကိုပိုဆိုးစေပါတယ်။
-Scheuermann’s ရောဂါ။Scheuermann၏ ခါးကုန်းခြင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ အပျိုဖော် လူပျိ ုဖော်မဝင်ခင် ကြီးထွားနေဆဲကာလမှာ စတင်ဖြစ်ပွားပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေထက် ယောက်ကျားလေးတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ခါးရိုးကုန်းတာကြီးက ကလေးတွေဖွံဖြိ ုးမှုပြီးကာရောက်မှ ပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။
-မွေးရာပါ ချိ ု့ယွင်းချက်ရှိခြင်း။ တကယ်လို့ ကလေးရဲ့ ကျောရိုးမကြီးဟာ မိခင်ဗိုက်ထဲမှာ သေသေချာချာ မဖွံဖြိုးလာခဲ့ဘူးဆိုရင် ကျောရိုးတွေက သေချာပုံစံမကျတော့ပဲနဲ့ ခါးရိုးကုန်းခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
-စင်ဒရုန်းများ။ ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ခါးရိုးကုန်းခြင်းက တစ်ချို့သော စင်ဒရုန်းတွေနဲ့တွဲနေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ မားဖန်း စင်ဒရုန်း ဒါမှမဟုတ် Prader-Willi ရောဂါတို့ပါပဲ။
-ကင်ဆာနှင် ကင်ဆာကုသမှုများ။ ကျောရိုးမှာဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါဟာကျောရိုးဆစ်တွေကို အားနည်းစေပြီး ပိုပြီးဖိလွယ် ကျိုးလွယ်စေပါတယ်။ ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသခြင်းနဲ့ ဓါတ်ရောင်ခြည်ပြကုသခြင်းတို့မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
လျော့တိလျော့ရဲထိုင်ခြင်းကြောင့် အပေါ်ပိုင်းကျောရိုးမှာ ကွေးတာပိုများပြီး ခါးကုန်းတာဖြစ်စေခြင်းကို ပုံစံမမှန်ထိုင်မှုကြေင့် ခါးရိုးကုန်းခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေကတော့ ကျောရိုးမှာပုံစံပျက်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေမှာ အတွေ့ရများပါတယ်။
Kyphosis (ခါးကုန်းခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ခါးကုန်းခြင်းကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ် ၎င်းတို့ကတော့
-အရိုးပွခြင်း ဒါမှမဟုတ် အရိုးသိပ်သည်းဆနည်းခြင်း
Kyphosis (ခါးကုန်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်ကသင့်ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးချိန်မှာ သင့်ရဲ့အရပ်ကို ကြည့်ပါလိမ့်မယ် ပြီးတော့ခါးကုန်းခိုင်းပါမယ် သူကတော့သင့်ရဲ့ဘေးကနေ သင့်ကျောရိုးကိုကြည့်နေမှာပါ။ တကယ်လို့ ခါးကုန်းတယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်ပိုင်းမှာ အဝိုင်းလိုက်ကြီးဖြစ်နေတာကို ဒီလိုပုံစံမှာမှပိုသိသာတာမို့ပါ။
-X-rays။ ရိုးရိုး X-rays တွေကိုရိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ ဘယ်လောက်ဒီဂရီအထိကွေးတယ် ခါးရိုးပုံစံပျက်တာကဘယ်လို ဆိုတာကိုကြည့်ပြီး ဘယ်လိုပုံစံ ခါးကုန်းခြင်းလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။
-CT ရိုက်ခြင်း။ တကယ်လို့အသေးစိတ်သိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပါက သင့်ဆရာဝန်က CT ရိုက်ဖို့ပြောပါလိမ့်မယ်။CT ဆိုတာက X-ray ပုံတွေကို ထောင့်မျိုးစုံကနေ ရိုက်ကြည့်ပြီး ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအတွင်းက တည်ဆောက်ပုံကိုကြည့်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့သင့်ဆရာဝန်က အလုံးအကျိတ်တွေ့တယ် ဒါမှမဟုတ် ပိုးဝင်တာလို့ သံသယရှိတယ်ဆိုပါက သင့်ရဲ့ ကျောရိုးမကို MRI ရိုက်ဖို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။MRIက ရေဒီယိုလှိုင်းတွေရယ် အရမ်းကောင်းတဲ့သံလိုက်ဓါတ်အားရယ်ကိုအသုံးပြ ုပြီး အရိုးနဲ့ တစ်ရှူးတွေရဲ့ပုံရိပ်ကို အသေးစိတ်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့သင်က ထုံတာကျင်တာခံစားရမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ကြွက်သားတွေအားပျော့သလိုခံစားရမယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်က စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဖို့အကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ စမ်းသပ်မှုတွေကတော့ သင့်ရဲ့အာရုံကြောက သင့်ရဲ့ ကျောရိုးမကြီးနဲ့ ခြေချောင်းလက်ချောင်း အဖျားအနားတွေထိ အာရုံကြောထိတွေ့ခံစားနိုင်လား ဆိုတာတွေဆုံးဖြတ်ဖို့ပါပဲ။
Kyphosis (ခါးကုန်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ခါးကုန်းခြင်းကုသမှုဟာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခြေအနေ၊လက္ခဏာတွေ ခံစားရတာတွေပေါ်မူတည်ပြီး ကုသရပါတယ်။
–အနာသက်သာဆေးများ။အပြင်ကဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရတဲ့သောက်ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ acetaminophen(Tylenol), ibuprofen (advil,Mortin IB) ,naproxen (Aleve)တို့ကို ဝယ်သောက်လို့ရပါတယ်။ ဒီဟာတွေနဲ့မသက်သာသေးရင် ပိုပြီးပြင်းတဲ့ အနာသက်သာဆေးတွေကို ဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့တကွ ပေးတဲ့ဟာတွေသောက်လို့ရပါတယ်။
-အရိုးပွခြင်းအတွက်ဆေးများ။အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာ ခါးကုန်ခြင်းဆိုတာက အရိုးပွခြင်းကြောင့်ပဲဆိုပြီးပထမဆုံးအနေနဲ့ ကောက်ချက်ဆွဲတတ်ကြပါတယ်။ အရိုးကိုအားဖြစ်စေမယ့်ဆေးတွေကိုသောက်ခြင်းနဲ့ ကျောရိုးမကြီး ကျိုးတာကနေကာကွယ်ပြီး ခါးကုန်းခြင်းကနေလည်းကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
တစ်ချို့သော ခါးကုန်းခြင်းကို အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်
-လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း။ဆွဲဆန့်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို လုပ်ခြင်းနဲ့ ကျောရုးကို ပျော့ပျောင်းစေပြီး ခါးနာခြင်းကိုလည်းသက်သာစေပါတယ်။ ဗိုက်ကြွက်သားတွေကို သန်မာစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးတွေကလည်း ပုံစံအနေအထားကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
-အပတ်များတပ်ဆင်ခြင်း။Scheuermann’s ရောဂါရှိတဲ့ ကလေးတွေဟာ body brace လိုဟာမျိုး တပ်ဆင်ခြင်းနဲ့ သူတို့အရိုးတွေကြီးထွားဖွံဖြိုးနေဆဲမှာပဲ ခါးကုန်းခြင်းကို ဆက်မဖြစ်တော့အောင်ရပ်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
-ကျန်းမာသောလူနေမှုဘဝ။ ကျန်းမာတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းထားခြင်း နဲ့ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးခြင်းတို့က ခါးနာတာကို သက်သာစေပြီး ခါးကုန်းခြင်းကဖြစ်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုသက်သာစေမှာပါ။
-အရိုးသိပ်သည်းဆအားကောင်းစေရန်ထိန်းသိမ်းထားခြင်း။ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ဗီတာမင်ဒီ ပါဝင်တဲ့အစားအသောက်တွေကို အချိုးကျကျစားခြင်း နောက်ပြီး အရိုးရဲ့သိပ်သည်းဆကိုစစ်ပေးခြင်း။ ဒီဟာကတော့ ကိုယ့်မိသားစုထဲမှာ အရိုးပွရောဂါ ရှိတဲ့လူပါခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် အရင်တုန်းက အရိုးကျိုးဖူးရင် တစ်ခြားလူကြီးတွေမှာလည်း အားနည်းတဲ့အရိုးမျိုးရှိရင် ကျိုးလွယ်တဲ့အရိုးမျိး နဲ့ ခါးကုန်းခြင်းဖြစ်နေရင် စစ်သင့်ပါတယ်။
Kyphosis. http://www.nhs.uk/conditions/Kyphosis/Pages/Introduction.aspx. Accessed July 12, 2017.
Kyphosis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kyphosis/basics/definition/con-20026732. Accessed July 12, 2017.
All About Thoracic Kyphosis: Forward Curvature of the Upper Back. https://www.spine-health.com/conditions/spinal-deformities/all-about-thoracic-kyphosis-forward-curvature-upper-back. Accessed July 12, 2017.
Kyphosis. http://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/orthopaedic_disorders/kyphosis_85,P07816/. Accessed July 12, 2017.